Ungakhubaza njani amaqela e-chrome ukuba ajonge igridi kwifowuni yakho ye-android
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Ungayikhubaza njani iithebhu zamaqela e-Chrome kumboniso wegridi kwifowuni yakho ye-Android
Ungayikhubaza njani iithebhu zamaqela e-Chrome kumboniso wegridi kwifowuni yakho ye-Android
UHLAZIYO:Inguqulelo ye-Chrome engu-91 ivale igridi yokujonga ukutshintsha kwendlela kwaye iflegi ayisasebenzi, ke wena & apos; d kufuneka ugcine iChannel 90 yesikhokelo sokusebenza, ngapha koko sibambekile ngombono wegridi kunye namaqela eethebhu okwangoku.
Ukusukela ngoFebruwari, usenokuba uqaphele ukuba Chrome iithebhu kwifowuni yakho ye-Android azikho kwaye zazinjani ngaphambili. Endaweni yenkqubo yokubekwa kwamakhadi apho ucofe nje ezo zazingafuneki, iChannel izama ukudibanisa iithebhu ngendlela ekuthiwa ziingcinga, njengokhetho olunikezela abasebenzisi be desktop.
Ngelishwa, uGoogle wabona kufanelekile ukunyanzela amaqela njengendlela emiselweyo yokulungisa iithebhu zakho, kwaye ukuba ngenye intsasa enobuqaqawuli uvuke emva kohlaziyo lweChannel ukuze ufumane uluhlu oludidayo lwezinto ebekufuneka ufundile ukujongana nazo, awunguye ndedwa.
Ngokwesiqhelo, ngokwamaqela, ngokungacwangciswanga, ngaphandle kokuba uzivulile kwindawo enye, kwaye bafuna impompo eyongezelelweyo okanye ezimbini zokugxothwa. Nantsi into ekufuneka uyenzile ukungadibanisi iithebhu zeChannel kwaye ubuyele kwithebhu yamakhadi amadala okujonga.
Cima iithebhu zeChannel zokuhlela kunye nembono yegridi kwifowuni yakho
Vula i-Chrome ye-Android.
Chwetheza okanye uncamathisele i-chrome: // iiflegi kwindawo yedilesi.
Khangela ukuLungiswa kweGridi yeThabhu kunye neeflegi zeQela lethebhu, cofa kwiimenyu zabo zokuhla.
Khetha ukhubazekile kulwakhiwo lweGridi yeThab kunye neenketho zeQela leTab.
Phinda uqalise i-Chrome yesikhangeli se-Android ukulahla ubeko lwegridi.
Vala kwaye uphinde uvule isiphequluli se-Chrome kwakhona ukutshintsha ukusuka kumaqela eethebhu ubuyele kwimbonakalo yekhadi elungileyo.
Ukucima amaqela eethebhu kunye nembono yegridi kwiChannel ye-Android
I-samsung galaxy s7 isivumelwano seminyaka emi-2
I-samsung s20 yokutshintsha isikrini
I-Android Auto ayisebenzi ngonomathotholo wemoto yakho? Nantsi iapos yokulungisa ...
Fumana i-Samsung Galaxy S21 5G yasimahla kwi-T-Mobile ngaphandle kokongeza umgca okanye ukuhambisa inani
I-AT & T inikezela ngesicwangciso sedatha yokwabelana ngexabiso lesicelo kubasebenzisi abangakwaziyo ukwala
Ukuthelekisa i-Samsung Galaxy S8 kunye ne-LG G6
Ngaba i-Apple iyenza ngenene i-iPod Touch entsha? Kwaye ukuba ikhona, ngubani owayeza kuyithenga?
Yizisa ipati naphi na apho uya khona kunye ne-Sony SRS-XB43 Somlomo weBluetooth
Isamsung kunye ne-AT & T yokubonelela ngexesha elinye lokutshintshisiswa kwamanzi kwonakalise iiyunithi ezisebenzayo ze-Samsung Galaxy S4
Izono eziSixhenxe eziBulalayo zeefowuni zala maxesha
I-Samsung Galaxy S6 kunye ne-Galaxy S6 edge: iingcebiso ezingama-36 kunye namaqhinga